यसकारण खोटाङको दिक्तेल बजार अनिश्चितकालीन बन्द « Janaboli
यसकारण खोटाङको दिक्तेल बजार अनिश्चितकालीन बन्द
काठमाडौं । चार जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण फेला परेपछि उद्योग वाणिज्य सङ्घ खोटाङले जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र दिक्तेल बजार बन्द गराएको छ । सङ्घले दिक्तेल बजारमा सञ्चालित प्रत्येक पसल तथा होटलमा पत्र पठाएर बुधबारदेखि सम्पूर्ण कारोवार बन्द गराएको हो ।
कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण गर्न अत्यावश्यकबाहेकका सम्पूर्ण व्यवसाय बन्द गर्न व्यापारीलाई आग्रह गरिएको सङ्घका महासचिव मनोजकुमार बजिमयले बताउनुभयो । “अत्यावश्यक पर्ने पसल बिहान ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म दैनिक तीन घण्टा खुला गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “अत्यावश्यकबाहेक बाँकी सबै प्रकारका पसल तथा व्यवसाय अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको हो ।”
दश स्थानीय तह रहेको जिल्लामा हालसम्म नौ जनामा कोरोना भाइरस सङ्क्रमण देखिएको छ । सङ्क्रमितमध्ये चार जना उपचारपछि घर फर्किएका छन् भने, पाँच जनालाई उपचारमा पठाइएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय खोटाङका प्रमुख पुण्यप्रसाद सिक्देलले जानकारी दिनुभयो ।
के उनी मोडल हुन् ? हाम्रो गौरव राष्ट्रिय झण्डाको सम्मान गरिन् की अपमान ?
काठमाडौं । देशको झण्डा हाम्रो गौरवको कुरा हो । तर अहिले एक जना मोडलले राष्ट्रिय
घुस रोक्न नसकेपछि सबै मालपोतका कर्मचारीलाई घर पायक सरुवा, भनसुन गरे कालोसूचीमा पर्ने
काठमाडौ । मालपोत कार्यालयमा हुने अनियमितता रोक्न र कर्मचारीको मनोबल बढाउन भन्दै भूमि व्यवस्थापन तथा
डुब्न थाल्यो तराई : मोरङमा दुईजना बेपत्ता, एक बालकको मृत्यु
विराटनगर । अबिरल बर्षाका कारण नेपालको तराई क्षेत्र डुब्न थालेको छ । पहाडी क्षेत्र पहिरोको
सुगौली सन्धिले गुमेको विशाल नेपाल फर्काउन अहिले नै सम्भव छ, सरकारले आँट गर्नुपर्यो : फणीन्द्र नेपाल
काठमाडौ । ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाका अध्यक्ष समेत रहेका सामाजिक अभियन्ता फणीन्द्र नेपालले भारतले हडपेको